Ubaba ushiye ingane yodwa eyodanselwa ekilabhini yabesilisa | News24
Ubaba ushiye ingane yodwa eyodanselwa ekilabhini yabesilisa
Sacramento - Ubaba waseVan Nuys eCalifornia ubhekene necala lokuhlukumeza ingane kulandela izinsolo zokushiya indodakazi yakhe enezinyanga ezingu-9 izelwe emotweni isikhathi esiyihora ngesikhathi edanselwa ngowesifazane ekilabhini yabesilisa.
U-Auwin Dargin, 24, ulivumile icala ngoMsombuluko ngesigameko esenzeka ngomhlK-9 Meyi eSynn Gentleman Club eNorth Hills.
Isekla lemenenja uMathew Hadeau wayehamba endaweni yokupaka izimoto kule kilabhu ngesikhathi ebona ikhasimende elalilokhu luphuma lingena kuyo njalo.
OLUNYE UDABA: Ivideo: Izikakele indoda ebithi iyadansa ekilabhini
UNadeau wabe esebheka imoto yaleli khasimende wabona ingane yentombazane ngaphakathi.
"Sezwa ukukhala sasesibona ingane emotweni," usho kanje etshela iphephandaba iLos Angeles Times.
UNadeau noweta wakulekilabhu bahlenga le ngane besizwa ngomunye umuntu onebhizinisi ngakulekilabhu. Bagqekeza imoto ukuze bekwazi ukuyikhipha ingane.
Ngemuva kwalokho uNadeau watshela ubasi wakhe ngengane base bethola ukuthi ngekaDargin bamuphazamisa esadanselwa, ngokusho kwe-KTLA-TV.
UDargin wahamba kule kilabhu ethe. "Nginikeni ingane yami ngiyazi ngenze umonakalo," kusho lesi siteshi.
UNadeau akafunanga ukunika uDargin ingane yakhe wabiza iziphathimandla. Ingane igcinwe kwabeChild Protective Service yaphinde yayohlolwa esibhedlela ngaphambi kokudlulisel;wa kunina, kusho iNBC Los Angeles.
UDargin uzovela angase agwetshwe iminyaka engu-6 ejele uma engase alahlwe yicala, kubika iHuffingtonPostnews.